ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အပူဘွိုင်လာနဲ့မီးရှို့ခံရသောလုပ်ငန်းဘူတာ၏ကို Maintenance - rayhab ဖြစ်ပါသည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အပူလောင်စာဆီဝယ်ယူပါလိမ့်မည် »
ဘူတာမှာစီးပွားရေးအပူနှင့်ဘွိုင်လာ Burning ၏စောင့်ရှောက်မှု
ခရိုင်အပူအစဉ်လောင်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ၏အတွင်းပိုင်းဘူတာစီးပွားရေးပစ္စည်းဝယ်ယူရေး၏ဘွိုင်လာကို Maintenance ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ် 4734 19 နေဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်:
တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2019 / 400221
ဗန်နှင့် Tatvan ဘူတာxnumxşလူတစ်ဦးလောင်စာရေနံ, Kapıköyနှင့်ကျောက်မီးသွေး Mus ဘူတာxnumxşလူတစ်ဦး, Hekimhan ဘူတာနှင့်2လုပ်သားများစုစုပေါင်းကျောက်မီးသွေးDoğanşehirဘူတာ2လူတစ်ဦးနှင့် 1 လ (10-6) ၏ 17 နေ့ရက်များလောင်ကျွမ်းဘွိုင်လာနဲ့အပူ၏ကို Maintenance စီးပွားရေး
ခ) Place: ဗန်, Tatvan ဘူတာညွှန်ကြားမှု, Kapıköy, Hekimhan, ဘူတာDoğanşehir၏ Mus ဘူတာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်
ဂ) Duration: နေ့စွဲ 15.10.2019, 30.04.2020 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆုံးသည့်ရက်စွဲ
က) Place: TCDD ညွှန်ကြားမှုခန်းမအစည်းအဝေးခန်းမÖzalperမှxnumx.bölgအဆိုပါ cad.no:xnumx5Yesilyurt / MALATYA mah.istasyo
ခ) နေ့စွဲနှင့်အချိန်: 12.09.2019 - 14: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ပြည်တွင်းရေးလောင်ကျွမ်းခြင်းနှင့်ဘွိုင်လာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအလုပ်နှင့်အတူခရိုင်အပူဘူတာ 04 / 01 / 2016 STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)5၏ပြည်တွင်းရေးလောင်ကျွမ်းခြင်းနှင့်ဘွိုင်လာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအလုပ် TC အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့်အတူခရိုင်အပူဘူတာ။ ဒေသန္တရရုံးပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်န်ဆောင်မှုများစီးပွားရေးပစ္စည်းဝယ်ယူရေး၏အပူဘွိုင်လာမီးရှို့စောင့်ရှောက်မှုအတွက်တည်ဆောက်ခရိုင်ဘူတာအိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ် 4734 19 နေဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည်ဖြန့်ဖြူး။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2015 / 183389 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: INÖNÜ MAHALLESI STATION ကို CADDESI 1 44080 MALATYA Merkez / Malatya ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 4222124800 - 4222124816 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: xnumxbolgemalz ဂိမ်း @ နုစာရွက်စာတမ်း၏ tcdd.gov.t CA) အင်တာနက်လိပ်စာမြင်နိုင်ပါသည် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အပူဘွိုင်လာကိုတည်ဆောက်ခြင်း၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ Kayseri ဘူတာရုံ, inns နှင့်မီးရှို့ဖျက်ဆီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်း 07 / 04 / 2016 Kayseri ဘူတာရုံ, inns နှင့် STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)2၏အဆောက်အဦးသမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးအတွက်ဘွိုင်လာအပူကိုမီးရှို့၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း။ CLOSE စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုဧည့်ခံနဲ့ 21 က MONTH 04 နေ့အကြား 2016 / 31 / 12-2016 / 8 / 10 ၏ဧည့်သည်များနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးအဆောက်အဦးဘွိုင်လာတွင်ပါရှိသောဒေသန္တရပစ္စည်းများစီမံခန့်ခွဲရေး KAYSERI GAR, 4734 19 အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေရေတွက် ဒါဟာဖြစ်လိမ့်မည်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2016 / 108604 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Anadolu Boulevard Behicbey YENİMAHALLE / တူရကီခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်အရေအတွက်ကနေတဆင့်: 3122111449 - 3122111225 ဂ) အီလက်ထရောနစ် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: လောင်ကျွမ်းနေသောအပူနဲ့ Maintenance န်ဆောင်မှုများဖြစ်လိမ့်မည် 06 / 02 / 2015 အပူနဲ့ Maintenance န်ဆောင်မှုကိုမီးရှို့ STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD) ADANA6သမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်လိမ့်မည်။ ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်ဒေသန္တရရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာန်ဆောင်မှုများဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ကို Maintenance အပူအနီးအနားမှာဧည့်ခံအိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ် 4734 19 နေဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2015 / 8309 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Kurtulus ခရိုင် Ataturk ရိပ်သာလမ်း 01120 Seyhan SEYHAN / ADANA ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3224536914 - 3224575807 ဂ) e-mail လိပ်စာ: အ @ TCDD xnumxbolgemudurlug တစ်) အရည်အသွေး ... : နု၏ https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 6-service ကိုဘာသာရပ်: .gov.tr ​​ဃ) တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းအင်တာနက်လိပ်စာတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အပူနှင့်မီးရှို့ဖျက်ဆီးကို Maintenance ဝန်ထမ်းရေးရာဝန်ဆောင်မှုများအတွက်လက်ခံရရှိလိမ့်မည် 04 / 01 / 2016 အပူမီးရှို့ဖျက်ဆီးအဘို့သိမ်းယူနှင့် STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD) ADANA6၏ဝန်ထမ်းရေးရာန်ဆောင်မှုများကို Maintenance သမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးလိမ့်မည်။ ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်ဒေသန္တရရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာန်ဆောင်မှုများဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ကို Maintenance အပူအနီးအနားမှာဧည့်ခံအိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ် 4734 19 နေဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2015 / 181214 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Kurtulus ခရိုင် Ataturk ရိပ်သာလမ်း 01120 Seyhan SEYHAN / ADANA ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3224536914 - 3224575807 ဂ) e-mail လိပ်စာ: အ @ TCDD xnumxbolgemudurlug .gov.tr ​​ဃ) တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းအင်တာနက်လိပ်စာတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်: နု၏ https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 6-service ကိုဘာသာရပ် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: လောင်ကျွမ်းနေသောအပူနှင့်ဘွိုင်လာသန့်ရှင်းရေးကယောဘ 26 / 02 / 2014 (01042014 AY အတွက်) အပူမီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းနှင့်ဘွိုင်လာသန့်ရှင်းရေးအလုပ် 15052014-15102014 / 31122014-4 ရက်စွဲများ Execution န်ဆောင်မှုများပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသမ္မတနိုင်ငံ STATE ရထားလမ်း Administration ရုံးချုပ် (TCDD) VANGOLU ကူးတို့ Operation Manager TCDD VANGOLU ကူးတို့ရုံး, အုပ်ချုပ်ရေးအဆောက်အအုံများ, အိမ်နှင့်အပူမီးရှို့ဖျက်ဆီးဒ STUDIO အဆောက်အဦးများနှင့် ပြည်သူ့ဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေန်ဆောင်မှုများAlımıhizmetအမှတ် 01042014 15052014 အပိုဒ်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည် Execution များ၏ဝယ်ယူအဆိုအရဘွိုင်လာ (15102014 AY အတွက်) သန့်ရှင်းရေးကယောဘ 31122014-4 / 4734-19 ရက်စွဲများ။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2014 / 20359 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Castle လမ်း MAHALLESI AHLAT CAD ။ 50 13200 TATVAN / BITLIS ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ် ...
ဘူတာမှာစီးပွားရေးအပူနှင့်ဘွိုင်လာ Burning ၏စောင့်ရှောက်မှု, TCDD ညွှန်ကြားမှုမှXnumx.bölg
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အပူဘွိုင်လာကိုတည်ဆောက်ခြင်း၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ Kayseri ဘူတာရုံ, inns နှင့်မီးရှို့ဖျက်ဆီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်း
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: လောင်ကျွမ်းနေသောအပူနဲ့ Maintenance န်ဆောင်မှုများဖြစ်လိမ့်မည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အပူနှင့်မီးရှို့ဖျက်ဆီးကို Maintenance ဝန်ထမ်းရေးရာဝန်ဆောင်မှုများအတွက်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်